﻿	Etu esi eme ọkụkọ Rotisserie (Rotisserie ma ọ bụ Oven) -kwụkwụ na Pennies - Ezi Ntụziaka
esi esi nri nke a mịrị amị egg noodles
Enwere ike iji spaghetti ihendori mee ka marinara ihendori
ihe-eme na dil pickles
iko ole osikapa ole
Enwere ike isi nri a na-esi nri ọkụkọ rotisserie
na oven ma ọ bụ na rotisserie !
Ọ dị nro, kemmiri ihe, juputara na ekpomeekpo oge ọ bụla! Kporie ya dika nrichi okuko ma obu jiri ya tinye akpuru , sandwiches, salads , ma ọ bụ ofe!
-esi mee ka oseose ọbara
Kemmiri Ihe Niile Mere Ha Ọkụkọ
Mgbe ọkụkọ bụ nke a kemmiri ihe & atọ ụtọ ọbụlagodi nke fọrọ afọ agaghị adị ka nke fọrọ afọ, enwere ike iji ya n'ọtụtụ ụzọ!
I nwere ike ime ya na oven ma ọ bụ na rotisserie . Ghaa ya ọ bụla masịrị gị, ma ọ bụ naanị site na nnu na ose ma ọ bụ jiri ude rotisserie chicken seasoning Ntụziaka n'okpuru.
Shred ya n'elu salad, gbanwee ya ọkụkọ Sanwichi , jiri ya na a ọkụkọ noodle ofe , ma ọ bụ mee ka ọ ghọọ a ọkụkọ ite achịcha . Ohere ya enweghị njedebe!
Nwere ike ifriizi ya ruo ọnwa atọ iji nwee ọkụkọ na-atọ ụtọ na aka mgbe ọ bụla usoro nhazi chọrọ maka ya.
velveeta mac na ntuziaka chiiz na ọkụkọ
ỌKỤKỌ Maka uzommeputa a, anyị na-eji ọkụkọ dum! Ọ bụrụ na rotisserie gị buru ibu ị nwere ike ịnwale toki, ma ọ bụ usoro a ga-atọ ụtọ nke ukwuu na nne ọkụkọ ọka!
Mmanụ oliv Anyị hụrụ ụtọ ụtọ nke mmanụ oliv na-ahapụ na ọkụkọ mana ị nwere ike iji mmanụ ọ bụla ị nwere n'aka. Oilgbakwunye mmanụ na-eme ka akpụkpọ ahụ dịkwuo nkọ.
Oge Gbalịa sizinin na uzommeputa a, a arụrụ n'ụlọ ọkụkọ sizinin , ma ọ bụ nke kachasị amasị gị ịzụ ahịa sizị!
gini bu ihe eji eme ihe na ite ozugbo
Otu esi eme ọkụkọ Rotisserie
M na-eme ọkụkọ rotisserie na rotisserie (nke m bụ nke eletriki) mana ọ bụrụ na ịnweghị, ị nwere ike ịme ya na oven dịka ị ga - eme ọkụkọ anụ ọkụkọ . Ọ bụ ezie na ọ bụghị na teknụzụ ọ bụ ọkụkọ rotisserie ma ọ bụrụ na a sie ya na oven, ekpomeekpo yiri nke ahụ!
Iji Kwadebe ọkụkọ:
Gwakọta oge na oge.
Ghichaa ọkụkọ ahụ ma jiri mmanụ oliv tee ya ma jiri ya gwakọta ya.
Bend nku dị n'azụ ọkụkọ ma kee ụkwụ ọnụ.
Iji mee nhazi a na pan anụ:
Ghichaa maka 12 nkeji na 450 Celsius F, wee gbadaa na 350 Celsius F ma mee ka ihe ọzọ ruo 60 ruo 70 nkeji.
Wepu ya na oven wee mee ka ọkụkọ zuo ike maka nkeji iri iji mechie mmiri ndị ahụ.
Iji mee nhazi a na oku rotisserie , ma ọ bụ na a Mgbakwụnye rotisserie maka imi ihe gị:
Esi nri nkeji 18-22 kwa paụnd (nke a ga-adịgasị iche dabere na ụdị rotisserie ị na-eji) ruo mgbe ọkụkọ ruru 165 Celsius F n'ime.
Gbanyụọ ọkụ ma hapụ ka ọkụkọ gaa n'ihu 'na-eburu nri' minit 15 ọzọ.
Ozugbo ewepụrụ ya na rotisserie (ma ọ bụ oven), hapụ ka ọkụkọ zuo ma ọ dịkarịa ala minit 10 iji mechie mmiri.
ogologo oge ole ka ị na-esi nri ọkụkọ soseji na oven
Etu esi egbutu okuko Rotisserie
Bee ọkụkọ rotisserie dị ka ị ga-eme pịrị a toki .
Wepu eriri gburugburu ụkwụ ma wepụ nku ya n'ahụ.
Iji mma mmerụ, gbutuo ụkwụ / apata ụkwụ a na-agbakwunye na ahụ. Kewapụ ụkwụ na apata ụkwụ, ọ bụrụ na achọrọ. Enwere ike ịgbanye nku ya n’ahụ.
Jiri mma nri siri ike, belata mpekere site na etiti ebe ọkpụkpụ ahụ gafere n'akụkụ aka ekpe na aka nri ọ bụla.
Arụ ọkụkọ dị ka mpekere ma ọ bụ shred maka salads ma ọ bụ eyiri, sandwiches, ma ọ bụ ofe!
E meela ọkụkọ Rotisserie ma ọ na-ejikarị ngwa ngwa n'ihi ụzọ dị iche iche esi eje ozi ya!
Jiri ya maka ọkụkọ salad bred , eyiri, na ndi ozo! Debe ya na friji n'ime akpa ejiri ma ọ bụ akpa akpa maka ihe dị ka otu izu.
Ihe mkpofu nwere ike ịbụ oyi kpọnwụrụ ! Label zippered akpa na ọ ga-echefu ihe dị ka ọnwa 3!
Ọkụkọ maka nri abalị!
Okuko ala Eze - zuru oke maka hapụrụ ọkụkọ
Mfe Ọkụkọ Roll Ups - nnukwu nri ma ọ bụ nri
Ọkụkọ Coca Cola - dị nro & kemmiri oge ọ bụla
Chikiny Chicken Casserole - zuru okè mfe casserole
Broccoli Chicken Roll-Ups - mfe creamy lasagna na-apụta
Love hụrụ n'anya nke a dị mfe Rotisserie Chicken? Jide n'aka na ị ga-ahapụ ọkwa na ikwu n'okpuru!
ahuekere butter fudge uzommeputa na sweetened condensed mmiri ara ehi
Ntụziaka Chicken Rotisserie
Oge Nkwadebeiri na ise Nkeji Oge nri1 aka elekere 12 Nkeji Oge Ezumikeiri na ise Nkeji Oge zuru ezu1 aka elekere 42 Nkeji Ọrụ8 servings Onye edemedeHolly Nilsson Emere na oven ma ọ bụ rotisserie oven nke a na - eweta ezigbo ọkụkọ, ooh, na crispy ọkụkọ! Bipute Ntụtụ
▢1 obere fryer ọkụkọ banyere 3.5lbs
▢1/2 ngaji paprika
▢1/4 ngaji anwụrụ paprika
▢1/2 ngaji ntụ ntụ
▢1/2 ngaji yabasị ntụ ntụ
Gwakọta oge niile na obere efere ma gwakọta ya nke ọma.
Iji kwadebe ọkụkọ, dab na akwa nhicha akwụkwọ.
Ghichaa mpụta ọkụkọ na mmanụ oliv na oge n’ụba na ngwakọta ngwa nri.
Jiri nwayọ gbanye nku n'azụ ọkụkọ. Iji twine kichin, kee ụkwụ ọnụ.
Kpochapu oven ruo 450 Celsius. Tinye anụ ọkụkọ n'akụkụ castiron skillet ma ọ bụ obere efere.
Ghaa minit 12, belata ọkụ na 350 Celsius F ma sie nri ọzọ 60-70 ma ọ bụ ruo mgbe ọkụkọ ruru 165 Celsius F.
Zuo 15 nkeji oge tupu ịkpụ ihe.
Esi nri na Rotisserie
Etinye na ọkụkọ na a rotisserie gbụrụ ya . Ọ bụrụ na-eji imi ihe na-ere ure, kpoo ọkụ na ọkara, 350 Celsius.
Nri ọkụkọ nkeji 18-22 kwa paụnd ,, ruo mgbe ọkụkọ ruru 165 Celsius F. (Ọkụkọ 3.5lb ga-achọ ihe dịka 60-80 nkeji).
Ozugbo ọkụkọ ruru ogo kwesịrị ekwesị, gbanyụọ ọkụ ma kwe ka ọkụkọ gbanwee 15 nkeji na-enweghị ọkụ.
Wepu si rotisserie na-eje ozi.
Ọkụkọ nwere ike jiri oge ogwu ọ bụla agwakọta. Nwere ike esi nri karịrị otu ọkụkọ n'otu oge, hụ na ọkụkọ anaghị emetụ.
Mara: Guo ntuziaka maka akụrụngwa rotisserie gị maka ụzọ arịgo.
Igwe rotisserie eletriki anaghị achọ preheating. Oge ga-adịgasị iche dabere na ọkụkọ, usoro eji na ụdị rotisserie. Ọtụtụ ọkụkọ ndị pere mpe ga-esi nri n'otu elekere. Maka nsonaazụ kacha mma, jiri temometa gụrụ ozugbo wee sie ruo mgbe ọkụkọ ruru 165 ° F.
Calorisị:Ogbe 222,Carbohydrates:1g,Protein:18g,Abụba:16g,Abụba Ajuju:4g,Cholesterol:Ogbe 71mg,Sodium:67mg,Potassium:180mg,Eriri:1g,Sugar:1g,Vitamin A:Ogbe 226IU,Vitamin C:abụọmg,Calcium:10mg,Iron:1mg
Isiokwumfe rotisserie chicken Ntụziaka, esi mee ka ọkụkọ rotisserie, ọkụkọ rotisserie N'ezieChicken, Isi Agụmakwụkwọ Esie yaOnye AmericaEnd SpendWithPennies.com. Ọdịnaya na foto bụ ihe nwebisiinka. Ringkekọrịta nke uzommeputa a gbara ume ma nwee ekele. A machibidoro ibipụta na / ma ọ bụ ịzigharị usoro nri zuru oke na mgbasa ozi ọhaneze. Biko lee iwu ojiji iji foto m ebe a .